Banyere Anyị - Gaomi Ruigu Labor Protection Co., Ltd
Shandong Gaomi Ruigu oru nchedo ngwa oru factory bụ a maara nke ọma enterprise ọkachamara na mmepụta na ire nke oru nchedo akpụkpọ ụkwụ na uwe, ụlọ ọrụ ka mgbe soro management echiche nke àgwà dabeere na nchekwa ọhụrụ. Ọ na-e-emepe emepe na-eto eto na di ọku ahịa iwu, na meriwo ezi ihe na otuto nke ọtụtụ na-ere ákwà na ahịa.
Anyị factory tumadi na-emepụta Ruigu ika oru nchedo ngwa oru. The ngwaahịa zuru oke, na isi na ngwaahịa ndị n'elu eri, ogwu ogbugba, oyi na-atụ nnyapade series, ngụkọta nke ihe karịrị 60 iche, magburu onwe ya mma, elu arụmọrụ. The ngwaahịa anyị factory, dabere na ụlọ ọrụ na ụdị ọrụ, na-eji dị iche iche ihe na Filiks izute mkpa nke ụdị nile nke ihe ọjọọ na-arụ ọrụ ọnọdụ.
Chen Jianhua, n'ozuzu njikwa, ụtọ ọhụrụ na ndị agadi ahịa ka ịlele nhazi na uka customization nke dị iche iche ekwekọghị, Anyị bụ njikere ịrụ ọrụ na elu àgwà nwetara na elu àgwà ọrụ, njikere na-agbalịsi na n'ọnọdụ nile nke ndụ ike ọhụrụ na elu mma na mma-gburugburu ebe obibi.